10 Iziheho Ezingajwayelekile Emhlabeni Wonke | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Iziheho Ezingajwayelekile Emhlabeni Wonke
Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuhamba eScotland, Qeqesha Ukuhamba Spain, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 07/12/2021)
Lezi 10 okukhangayo okungajwayelekile emhlabeni wonke kuzokumangaza. Isonto le-Cinderella elinesithende esiphezulu, amagquma inganekwane, amabhuloho amisiwe, kanye nomhubhe okhethekile eNgilandi – zimbalwa nje ezingavamile futhi ezixakile, izindawo ezikhangayo okufanele uzivakashele emhlabeni jikelele.
1. Iziheho Ezingajwayelekile Emhlabeni Wonke: I-Balcony kaJuliet
Bambalwa kakhulu abantu abazi ukuthi indaba kaRomeo noJuliette yenzeka eVerona. Ngaphezu kwalokho, bambalwa kakhulu abantu abajwayelene nesigcawu sothando kuvulandi. Enye yezinto ezikhangayo kakhulu ongazivakashela eVerona yi-balcony kaJuliet. I-balcony iyingxenye yendlu, where a Cappello family lived in the 13th century. Nokho, i-balcony edumile yanezelwa kuphela endlini ku- 20ekhulwini th.
Ngaphezu kwalokho, i-balcony isingesinye sezindawo eziheha kakhulu eYurophu. Ngenkathi i-balcony ingenayo indima yangempela ekuhleleni indaba ka-Romeo noJuliet, idonsa amakhulu ezivakashi minyaka yonke. Ngisemathandweni, inhliziyo ebuhlungu, abaphuphi kanye nabathandi bakaShakespeare, beze bezoshiya amanothi abo othando, izifiso, kanye ne-graffiti odongeni ngaphansi kwe-balcony kaJuliet.
2. Fairy Glen, I-Isle of Skye
Okumise okwekhoni, amagquma aluhlaza okotshani, ezungezwe amachibi nezimpophoma, I-Fairy Glen ingenye yezindawo ezingavamile kakhulu ongazivakashela e-Isle of Sky. Nakuba ungekho umsuka owaziwayo wegama eliyingqayizivele, Indawo ye-Fairy Glen ine-charm ekhethekile.
Indawo engcono kakhulu yokubukwa okuhle kwe-Fairy Glen ivela e-Castle Owen. Le ndawo akuyona inqaba yangempela, kodwa kunalokho ukwakheka kwedwala elifana nenqaba ekude. UFairy Glen mncane impela; Ngakho-ke, kungcono ukuyihlanganisa kanye nokuvakashela i-Kilt Rock, Ikhehla laseStorr, kanye namachibi ezinganekwane.
3. I-Electric Ladyland Amsterdam
Imnyuziyamu yokuqala yobuciko be-fluorescent emhlabeni, le ukukhangwa kwe-electric Ladyland e-Amsterdam ingenye 10 ezikhangayo ezingavamile eYurophu. Ngisho noma ungeyena umlandeli wamamnyuziyamu, le museum ye-fluorescent iyinto enhle kakhulu yezingane kanye nabantu abadala. Ngaphezu kweqoqo elimangalisayo lamaminerali e-fluorescent, I-Ladyland iveza ubuciko obumangalisayo be-fluorescent kusukela kuma-1950s. Ngaphezu kwalokho, izivakashi zithola ithuba eliyigugu lokubamba iqhaza ekudaleni owazo umsebenzi wobuciko, ekukhanyeni okumibalabala.
Lokhu kukhanga okumangalisayo kusenkabeni yesifunda saseJordaan e-Amsterdam, lapho igumbi elingaphansi elimnyama likhanyisa izibani ezimibalabala. Iqanjwe nge-albhamu kaJimmy Hendrix ethi Electric Ladyland, lokhu kukhanga okupholile kumayelana nobuciko be-psychedelic nomculo wama-70. Akungabazeki, I-Electric Ladyland Museum e-Amsterdam ingenye yezindawo eziheha kakhulu emhlabeni.
4. I-Bude Tunnel, Cornwell England
Kubukeka njengomhubhe ojwayelekile wepulasitiki endaweni yokupaka izimoto esuphamakethe yaseCornwall, Umhubhe weBude uyamangalisa. Lokhu kukhanga okungavamile kungenye yezinto eziphezulu 10 okukhangayo e-England ngenxa yezinkulungwane zezibani ze-LED ezikhanyisa ngemibala eminingi.
Itholakala edolobheni laseBude elinebuthongo, le 70 m umhubhe unomlingo uma ukhanyisiwe. Isikhathi esingcono kakhulu sokuza kusihlwa, ukuze uthole ulwazi lokukhanya kokugcina. Ngenkathi iBude Tunnel ibonakala icacile emini, ebusuku kuba yisimangaliso emhlabeni, ukuheha izivakashi ezivela kulo lonke elaseBrithani. Ngezansi, iBude Tunnel ingaba a isitobhi esijabulisayo ohambweni lwakho olunqamula i-Europe, lapho isimangaliso sangempela sobuchwepheshe sikhanyisa amehlo nezinhliziyo zabancane nabadala.
5. Iziheho Ezingajwayelekile Emhlabeni Wonke: Spreepark Germany
eBerlin iphaki lokuzilibazisa wazi izikhathi ezingcono, ikakhulukazi ekuphakameni kwayo 1969. I-Spreepark isetshenziselwa ukuheha 1.5 izigidi zezivakashi, ukugibela phezu kwayo 40 amakhabethe angama-45-metres Ferris wheel. ISpeerpark ibiyindawo eheha kakhulu eMpumalanga Jalimane kwaze kwaba sekuhlanganisweni 1991.
Ekuphakameni kwayo, Izivakashi zingagibela i-rollercoaster ehlanyayo, Ukugibela amanzi eGrand Canyon, nezinkomishi ezinkulu eziphendukayo. Ngenkathi leli paki lilahlekelwe ukuduma ngenxa yokuncipha, kanye nokulahlwa, I-Spreepark yahlala iyindawo ejabulisayo yokuvakashela eBerlin. Ngaphezu kwalokho, ipaki yokuzijabulisa elahliwe isiphenduke enye yezindawo ezikhangayo ezingajwayelekile eYurophu, iyafinyeleleka futhi ivulekele izivakashi ezinelukuluku.
Hhayi kude ne-Shanghai, kusukela kumabhilidi namathempeli asendulo, uzothola enye intelezi yezakhiwo emfanekisweni wedolobha lamaNgisi. Imigwaqo yeCobblestone, ibandla, i-medieval town square, kanye nophawu lokukwamukela eThames Town.
Idolobha laseThames laliyingxenye yohlelo olukhulu lokwakha izindawo ezingaphansi komhlaba, kodwa icebo alizange lifezeke. Ngakho, namuhla izivakashi eziya eShanghai zingababaza ezinye zazo amabhilidi amangalisa kakhulu emhlabeni futhi ume ukuze uzulazule ucezu oluncane lwaseLondon eChina.
7. I-Caminito Del Rey Malaga
Kumisiwe 100 amamitha ngokumelene nezindonga zomhosha, I-Caminito del Rey ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuvakashela eSpain. 2.9 km ibhuloho lezinyawo, 4.8 km indlela yokufinyelela, le 7.7 I-km ubude be-Camino yayivame ukuba yindlela yesevisi eya edamini. Nokho, namuhla ingenye yezindawo eziheha izivakashi eMalaga.
Esinye sezizathu ezenza i-Caminito ihehe abahambi abaningi indawo yayo. Hlala eduze kwe-Los Gaitanes Gorge, i-canyon ephawulekayo ye-limestone ne-dolomite. Ngakho-ke, naphezu kwamabhuloho amancane nalengayo, ukukhanga okungajwayelekile i-Caminito del Rey ingenye yezindawo okufanele uzibone e-Andalucia, ikakhulukazi kubathandi be-adrenaline.
8. I-Giant Glass Slipper Church eTaiwan
Kuvulwe phakathi 2016, Isonto lomshado lengilazi yesithende esiphezulu liphethe irekhodi laseGuinness lesakhiwo esimise okwesicathulo esiphakeme kunazo zonke emhlabeni. I-giant glass slipper iyindawo yomshado edumile kodwa ayinawo umsebenzi wenkolo wangempela. Nokho, abanye bangase bathi i-giant glass high heel ibukeka njengesicathulo sikaCinderella.
Isonto elinezithende eziphakeme eTaiwan 17.76 amamitha ngobude futhi yakhiwe ngaphezu 300 ingilazi eluhlaza okwesibhakabhaka enombala ogqamile, ishiya umthelela omangalisayo kwabayibukayo. Lokhu kukhanga okungajwayelekile kutholakala e-Ocean View Park elokishini laseBudai eTaiwan.
9. Iziheho Ezingajwayelekile Emhlabeni Wonke: Impi yase-Orange Italy
I-carnival yase-Ivrea iyenzeka 3 izinsuku ngaphambi kwe-Fat ngoLwesibili. Leli holide eliyingqayizivele liletha abantu esikhethekile “impi” imigwaqo e-Ivrea, bejikijelana amawolintshi. Naphezu kokuzwakala njengokulwa kokudla okujabulisayo, impi yewolintshi ingaba nodlame impela, futhi abaningi ababambiqhaza bashiya belimele futhi belimele.
Ukukhanga okunodlame kudalwe ngenxa yesehlakalo esinodlame kakhulu. Kuthiwa kwake kwanqunywa intokazi embi nge-marquise. Yize kungacaci ukuthi likhona yini iqiniso kule ndaba, noma kunjalo amakhulu abantu aba khona emakhanivali awolintshi minyaka yonke. Ngakho, okwenza kube ngenye yezindawo ezikhangayo ezingajwayelekile e-Italy.
10. I-Upside Down House Fengjing Idolobha Lasendulo
Lokhu kukhanga okungajwayelekile kuwumbono oyingqayizivele edolobheni lasendulo iFengjing. Idolobha elidala elidumile eChina laziwa ngemisele yalo, futhi kusukela 2014 yaziwa ngokuba yikhaya le-Upsidedown house. Lapho bengena endlini izivakashi zingathola ifenisha nezinto zasendlini, kufana nendlu ebheke phezulu ePoland.
Lapho engena endlini, uzothola konke kubheke phansi, ngakho-ke akukhona nje ngaphandle. Nakuba kungekho okwenziwa kulokhu kukhangwa, umuntu akanakuthatheka futhi ahlatshwe umxhwele yilo mklamo wezakhiwo ongavamile.
Thina ku Londoloza Isitimela uzokujabulela ukukusiza uhlele uhambo lokuya kulezi 10 ezikhangayo ezingajwayelekile emhlabeni jikelele.
Ingabe ufuna ukushumeka iposi lethu lebhulogi elithi “Izikhanga Ezingajwayelekile Ezingu-10 Emhlabeni Wonke” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Funusual-attractions-worldwide%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ezikhangayo okungajwayelekile UnusualAttractions unusualattractionsworldwide